Ukuvalwa kweMegaupload kunye nokuboniswa okuthile - iGeofumadas
Ukususela ekuvaleni kweMegaupload kunye nezinye iimpawu
NgoJanuwari, 2012 Internet kunye neBlogs, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Umcimbi uye waba yibhombu yehlabathi lonke ngeloxesha imithetho ye-SOPA ne-PIPA yayisele ifudumele indalo. Ukutyhilwa kwenani lezigidi ezazenziwe ngabadali bazo kunye nolwakhiwo lwasekhaya ababeludibile ziyamangalisa, njengoko kusabela kuluntu lwabasebenzisi ngezizathu ezisusela kwifilosofi ephezulu ukuya kwisigculelo sokugculelwa. Okwenziwayo kwamaqela anjenge-Anonimous isilumkisa ukuba imfazwe kwindawo yemidlalo ye-cyber ingasibulala kuxhomekeko esiphila kulo kwihlabathi elihlangeneyo kunye nehlabathi.
Umcimbi kukuba iMegaupload yaba sisalathiso sobukhulu bokukhuphela. Kuthiwa akukho ngaphantsi kwe-4% yokugcwala kwemihla ngemihla kwi-Intanethi kwathathwa leli shishini, nelalivaliwe phantsi kwengxabano yokubayenzelwe injongo engekho mthethweni«.
Icala elisemthethweni loku
Ngokuqinisekileyo iyimfuneko ngoorhulumente, iinkampani kunye neengcali phuhlisa imigaqo-nkqubo. Uninzi lweLatin America, ukuba namashishini okudala ayisebenzi, njengokubhala iincwadi, ukuvelisa umculo, iimovie okanye ukuphuhlisa izixhobo zekhompyuter kuba kuxhaphake kakhulu ukuba ukwenza iikopi ezingekho mthethweni asisigebenga, kwiimeko ezininzi umsebenzi woorhulumente mncinci kangaka. nokuba iiofisi zikarhulumente zisebenzisa iilayisensi ezingekho mthethweni kwaye zikhuthaza "abantu" umculo ogciniweyo okhutshelwe ukonakalisa umbhali wasekhaya otyale imali kwimveliso yawo.
Iimpikiswano zokuba isoftware iyabiza kakhulu iba yinto ehlekisayo, ukunika imizekelo embalwa:
Kutheni le nto iproperetary GIS ixabisa i-1,500 yeedola? Kwaye kutheni kufuneka uhlawule i-1,300 kulwandiso ngalunye?
Kuba intengiso injengoko, ukuxhasa ishishini lamazwe aphesheya kubiza imali, ukubeka imveliso kwindawo leyo kunye nokuyigcina ihlaziyiwe kufuna izigqibo zokuthengisa ezigcina ngokubeka ixabiso kuyo.
Kodwa kwakhona kuba ngesixhobo sisenza imali, umsebenzi weemephu ohlawulwa ngokuthobeka usivumela ukuba silufumane olo tyalo-mali. Sinemveliso ngakumbi kuba senza umsebenzi ongcono ngokungcono njengoko sasenza ngaphambili ngemephu ephepheni Maila kwaye i-crisscross itafile ekhanyayo okanye kwiglasi yefestile.
Asinakho ukukhanyela ukuba iteknoloji isenza sibe nemveliso. Sibhatala ikhompyuter, kuba ngayo sivelisa izinto ezisetyenziswayo ngakumbi, sihlawula isoftware yeCAD kuba asikwazi ukubamba ibhodi yokudweba kwaye senze izinto ngemveliso ephantsi. Kungenxa yoko le nto sihlawula kwisoftware nakwi-Hardware, kuba sikwenza ngexesha elincinci kunye nomgangatho umthengi afuna; Zombini iimeko zimela izibonelelo zoqoqosho. Ukuphuma kwenye ihegi kukuba ezinye iinkampani zidida into yokuthengwa kwezinto ezintsha, kodwa akukho mntu ugcina indodolite yasendle yeminyaka engamashumi asixhenxe kwaye ithenge isikhululo esipheleleyo kuba intle.
Ukuba asicingi njalo, Sisebenzisa isoftware yoMthombo ovulekileyo Kwaye kuphelile. Umsebenzi ofanayo -kwaye ngcono-Unokwenziwa ngesixhobo sasimahla esifana ne-gvSIG okanye iQuantum GIS. Uvelwano olufanayo alunakuthethwa kwezinye iindlela zasimahla ezingenalo ukukhula okuninzi kunye nokuzinza.
Ayilunganga! EMegaupload sikhuphe iincwadi sasihlala kwiDyunivesithi, ezinye zazo azisekho.
Masibe nzulu. Ukuba umntu useDyunivesithi, kungenxa yokuba baye bafunda ixabiso elimela lona ulwazi. Kuya kufuneka utyalomali ezincwadini, ukuba awunayo imali, kufuneka uzibeke kumda wethala leencwadi leYunivesithi. Kodwa ukunqongophala kweenkonzo zemfundo akunakulungelwa ukuba kungabikho semthethweni, ukuba bekunjalo xa uphumelela, uzakuhamba usiba impahla yomnye umntu ukuze uzuze.
Kungekudala kufuneka siqonde ukuba isidanga nawo usenza iingcali, oku kubandakanya ukuhlonipha kutyalo-mali olwenziwa ngabanye kulwazi kunye nokuba lufakwe kwinkqubo yecomputer okanye incwadi. Nje ukuba ufumane isidanga sakho, ulindele ukuvelisa ngakumbi kungekuphela nje ngokuba ufunde ngaphezulu, kodwa ngenxa yokuba ungabiza ngaphezulu; kuba ndicinga ukuba awuyi kwenza udliwanondlebe kwaye uyinike ngenxa yenkampani ekuyalele ukuba wenze iikopi kwaye uyihambise kwi-Intanethi.
Ayikhathaleli intanda-bulumko okanye inkolo, kuphela yintlonipho yomgaqo-siseko jikelele owathiwa nguConsusio 300 kwiminyaka phambi kukaKristu:
Into ongafuniyo ukuba yenziwe ngayo abanye, makungabikho kubo.
Icala elingekho mthethweni
Lo mbandela untsonkothileyo ngenxa yemeko zokuziqhelanisa ezazingekho kwiminyaka engama-30 eyadlulayo. Ipirism ayikaze ibe njalokulula ukuziqhelanisa«. Umbuzo ungena embuzweni: ukuba into eyenziwe yi-FBI isemthethweni, ixhaswe kwaye isemthethweni, ngowuphi umthetho weSOPA?
Ukungahambi kakuhle kuhlala kwimali yomthetho wamazwe aphesheya. Ilungelo labo basebenzise iMegaupload ukugcina iifayile ezingakhange ziphule ilungelo lokushicilela, nelalihlawulele loo nkonzo. Ke iimpembelelo zeenkampani ze30 zinobunzima obungaphezulu kwelungelo lezigidi zabasebenzisi.
Mhlawumbi eyona nto ikhathaza kakhulu sisiko lokungenelela esinokuthi la magunya enze oko sele sikwazi. Ndizibuza:
Ukuba umgrogrisi otshutshiswe nguRhulumente waseKuwait eze kuzimela kule ndawo yaseTomball, nge1 Houston ixesha, ngaba amaMelika ayakuvumela amazwe aliqela eMbindi Mpuma eze kubhomba kwiindawo ezininzi zaseTexas ade ayifumana?
Kodwa bayakholelwa ukuba banelungelo lokuyenza naphi na emhlabeni.
Ke, ukukhetha ubungakanani bento abayenzileyo nge Megaupload, yile:
Yintoni ebinokwenzeka ukuba ngomthetho omtsha inkampani ibonakalisa ukuba kwiiseva ze-imeyile ze-Gmail kugcinwe Izinto ezininzi ezinamalungelo okushicilela?
Ukuba basebenzise unyango olufanayo, kwaye bagqiba ekubeni bavale uGoogle, ngokuqinisekileyo kuya kuba sisiphithiphithi emhlabeni wonke. Kodwa masithi abayivali iGoogle, kodwa bayayenza ngenkonzo evumela isenzo esingekho mthethweni kwaye bavala i-Gmail ngobusuku. Ukujonga ukuba ingakanani ngoku ixhomekeke kwiakhawunti ye-imeyile: apho iifayile zethu zigcinwa khona, ukubeka esweni umsebenzi wethu, ukuhamba kweshishini lethu, abafowunelwa, ucinga nje ngabo ufuna ukubona.
Kukho okuninzi okuthetha malunga nokuphulwa kwemfihlo. Ityala leMegaupload libonisa ukuba kukho amandla okwazi ubumfihlo kunxibelelwano lwe-elektroniki. Kwaye ukuba umntu ufuna ukusebenzisa oko kububi ... kuyothusa. Ngaphandle kwento yokuba incoko ezingaphezulu kwe-Facebook, i-Gmail okanye i-Yahoo Messenger zenziwa zenziwe esidlangalaleni ngokubhala idilesi ye-imeyile yabantu bobabini, kuya kuba kubi kwiinkampani ezinkulu ukuba zisebenzise ithuba lolwazi lwabo bakhuphisana nabo ukuze basebenzise ithuba.
Malunga noku, i Iinkonzo ze-P2P kunye namaqhinga amaninzi ... kunokuthetha okuninzi kwaye akuhambelani kweli nqaku.
Ukuba kukho inzuzo xa kuvalwa iMegaupload, kukuba zonke iinkampani ezibandakanya isenzo esifanayo ziye zaqala ukuphonononga izicwangciso zazo, kubandakanya iinkonzo esizisebenzisileyo sonke kunye nomgangatho olungileyo kakhulu kwimeko yeDropBox okanye iYousendit. Akukho mfuneko yokuba ngabathengisi bethamsanqa ukuxela kwangaphambili ukuba kukho uhlaziyo lwemigaqo-nkqubo yokusetyenziswa kwezi ndawo kunye nokubekwa esweni okukhulu kwizenzo ezibolekisa ngokungekho semthethweni.
Ayisiyo eyokuba abanazo, kodwa okwangoku xa uxela ukwaphulwa, umthetho olandelwayo ukhokelela kulwazi oluninzi kakhulu ukubonisa ukuba ungumbhali okanye ungumnini wemveliso ekunika umnqweno wokulibala isifundo; ukuze ekugqibeleni bacime ifayile yomsebenzisi, endaweni yokufaka ngokubanzi isilumkiso kuhlobo lolo luxeliweyo.
Ngokuchasene noko, olayisha iifilimu, umculo, isoftware okanye iincwadi akufuneki zibonakalise nantoni na. Kuya kufuneka ubhale igama legama kuGoogle, AutoCAD 2012 ukunika umzekelo, kwaye siza kubona ukuba indawo zokukhuphela zikwenza umsebenzi omninzi kangaka wokuzibonakalisa ukuba ziqala ukubonakala kwiinjini zokukhangela, nakumaxa amaninzi phambi komenzi omnye. Ngokuqinisekileyo uGoogle kuya kufuneka enze uhlengahlengiso kwi-algorithm.
Njengoko yenzekile nguNapster, iMegaupload ayizukukwazi ukuvuselela, ingasuki kwisandla sombhali wayo imbali yolwaphulo-mthetho incinci kunobubi. Mhlawumbi uluntu lwe-hacker luya kuyithatha kwakhona, okanye iziza ezixhamle ngokuvelisa i-traffic kwezi ziqulatho, kodwa eyona nto iqinisekileyo kukuba abo bakhuphisana nabo baya kuthatha amanyathelo ukuthintela ukuchasana nomthetho ukuze bambe isikhundla esasiphathwe nguMegaupload, esasifika kwi50 Undwendwelo lwezigidi mihla le. Mhlawumbi bonke banokuba nomdla omncinci ekwenzeni isitayile sokulamba ukuze bakhusele iMegaupload, kuba ngendlala abayizisileyo, ukuphela kwabo kunokuba yimpindezelo emnandi. Inye yazo zonke ziya kubakho endaweni yazo; ewe ngemithetho emitsha phambi kwesi silumkiso.
Iza kuba ngubani? I-MediaFire, iFayilefo, Ukwabelana ngokukhawuleza, i-4shared, iBadongo, iTurboupload… ayiyonto yexesha, ngumcimbi weSOPA.
Ewe, kulula, kufuneka silwe ukuze umthetho we-SOPA / we-PIPA kunye nokuphuma kwawo kwilizwe ngalinye kungapheli nelo nqanaba lamandla amakhulu. Okokuba abapolitiki bangayenzi imithetho abangayiqondi nokuba yeyiphi na, loo nto ilawulwa ngendlela yokuba kungabikho zimpawu zichaziweyo esele zichaziwe zokwenza unothisa yenethiwekhi.
Kwabo bethu abazinikele emsebenzini, siphinda sazi ngakumbi ukuba iiofisi zethu zisebenzisa isoftware esemthethweni kwaye siqhubela phambili ngokwazi ezinye iindlela ezizezinye ezinokubanakho.
Kulabo basebenzise iMegaupload ngokusemthethweni, ukuba balwele ilungelo lokubuyiselwa, ubuncinci ukuze bakwazi ukhuphelo lweefayile ababezigcinile, bazilayishe kwenye indawo kunye nolungiso lweekhonkco olwalathisa ukugcwala kwabantu kwezo fayile. Umxholo ongakhuselwanga owayelapho kwaye umele igalelo lenkcubeko, ngokuqinisekileyo unokufunyanwa kwenye indawo.
Kwaye kwabo benze ubuqhetseba obukhulu eMegaupload ... ukuba bazikhathalele ngenxa yokuba babenikezele ngolwazi oluninzi, ngoku ukuba yonke into abayenzayo ngaphakathi iyaziwa ngamatyala asemthethweni.
Post edlulileyo«Edlulileyo InfoGEO + InfoGNSS = MundoGEO
Post Next Yakha i-app yethu yeselulaOkulandelayo "
I-3 iphendula "ukuvalwa kweMegaupload kunye nokubonisa"
I-Pirism iya kuhlala ikhona, kungekuphela kwimidiya yedijithali, ngelishwa iyinxalenye yendalo yethu njengoluntu kwaye oko akuthethi ukuba ndikholekile. Le meko, njengayo yonke into elungileyo nengalunganga ngathi njengomntu, iyabonakala kwilizwe ledijithali.
Yintoni eyinyani, kukuba, ngomvuzo ophakathi, asikwazi ukuthenga iilayisensi ezinjalo. Kulapho kungekho banzi, apho iinkampani ezinkulu zihlalutya iindleko zazo kwiinkampani ezinkulu okanye abantu abakhulu.
Ingxaki ye-SOPA, i-PIPA, i-ACTA phakathi kwabanye, kukuba inika amandla koorhulumente nakwiinkampani, ukwaphula imfihlo yabasebenzisi nokufumana izibonelelo kubo.
Ndithatha njengomzekelo, apha eMexico, ukuba ubhaliso lweeselfowuni kunye nedatha yethu efana negama kunye ne-CURP, ukuphanga ngomnxeba kwakuza kuphela, okungazange kwenzeke. Ukucinga nje ukuba urhulumente unayo le datha yabucala, ndiqala ukungcangcazela ndisazi ukuba bafikelela kwizandla ezingalunganga. Imibuliso
Ewe, yinto yentlalo ekulula ukuyisombulula njengokuzisa ukulingana emhlabeni. 🙂
Kuyinyani kwaye kuyinyaniso ukuba ubuninzi bobuninzi abuthobeli isidingo sokwenza imveliso, kodwa umntu uzimisele ukuthenga abanye abantu:
Ukuba umntu akanakuthenga i-AutoCAD igcwele, thenga i-LT, ilingana ne US $ 1000
Ukuba awukwazi, uyokuthenga i-IntelliCAD ye-US $ 500 kwaye ukuba ibonakala ibiza kakhulu emva koko uthenga i-QCAD ye-US $ 60.
Ukuba awunaso isiqingatha somvuzo omncinci we-QCAD, kulindelwe unyaka omnye kwaye iLibreCAD ihliswe.
Olunye ukhetho kukubamba ibhodi yokuzoba kunye ne-chinographs. Ukuba uthatha isigqibo kwi-IntelliCAD, uya kwenza ngendlela oya kwenza ngayo kwi-AutoCAD, kwaye uya kuqokelela umsebenzi wakho. Ngemizobo eli-14 eyenziwe ngumntu opopayiweyo ngexabiso lama-US $ 37, ilayisensi inokuhlawulwa.
Ingxaki kuxa sikholelwa ukuba ubuqhetseba sisenzo esifanelekileyo kuba akunakwenzeka ukuba siyeke. Kungenxa yoko le nto amaphulo e-OpenSource ekufumanisa kunzima ukuba azinzile, kuba abantu babona kulula ukuba baqhekeze iOfisi yeMicrosoft kunokuba bafunde iOpenOffice.
Ukuziphatha kakubi kusikhokelela ekubeni sikholelwe ukuba yonke into inokukhutshelwa apho simahla. Ukuya kwinqanaba lokuba abantu bangafuni ukuhlawula ilayisensi ye-Stitchmaps exabisa i-US $ 50.
Imibuliso, Enkosi ngokufaka.
UAndrea Salinger uthi:
Bekungayi kubakho piracy ukuba abantu banemali eyaneleyo yokuthenga iimveliso. Kwaye ixabiso lemveliso alivumelekanga. EMexico, umntu ofuna ukuthenga i-autocad 2012, umzekelo, kuya kufuneka anyuse iminyaka emibini yomvuzo ubuncinci ukuze akwazi ukufikelela kwinkqubo. Ngelixa eHolland, umntu ofuna ukuthenga inkqubo efanayo unokuxabisa iinyanga ezintathu zomvuzo ubuncinci. Umahluko ngowasekuhlaleni, abantu bafumana ubuvuvu ngenxa yento elula yokuba imveliso yokuqala ikude nobunyani bayo.
Ewe kunjalo, uya kuba uphikisa ukuba awuyithengi i-2012 autocad, ukuba uthenge ikhabethe lokuhamba ngeziciko zokuhamba.
I-Pirism yinto yentlalo nezoqoqosho. Ayivalwanga ngokukodwa kwilungelo lokushicilela.
Umzekelo, iincwadi ezininzi ezingasisiseko ekwakhiweni kwabafundi, azisafunyanwa kumathala eencwadi. Kodwa awuzifumani ivenkile yeencwadi. Kutheni? Kwinyani elilula lokuba abathengisi kwaye iinkampani zokupapasha akufuneki zibahlele. Ngokulula nangokulula bayayeka, kodwa bagcina amalungelo okushicilela, abazithengisi okanye abanikezeli. Kwaye ke uthini malunga nezo zihloko? Balahlekile ngumbono we-mercantile.
Yintoni onokuyicinga patent yamayeza. Xa ufumanisa ukuba iilebhu eziphambili zamachiza zihlangana eSwitzerland ukuze uvume ukungalihlisi ixabiso lamaxabiso amayeza.
Okanye ukuphanga okwenziwa yiMacrosoft kwimac ukuphumelela kwayo isi-7; ubusela bobuchwephesha ukusuka kwi-Boing ukuya kwi-Aerobus; okanye ubusela bobuchwephesha ukusuka eCervélo ukuya eCannondale; Ukuhlolwa kwePrincess kwiMac Laren; Itekhnoloji ye-Intel eyebayo kunye namagosa avela kwi-AMD; I-Android, imisebenzi kaSteve ecaphukisayo yobusela bemizi-mveliso; okanye i-Apple ngokuchasene nePhillips; Mercedes Benz kwiinjineli zeMaseratti.
Kulula kakhulu ukuba nomlawuli kodwa ulinganise ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo. Ingxaki kukuba amashishini athatha inxaxheba kwamanye amazwe afuna ukuba noluntu lonke njengabaxumi abaxumi. Kuphela koko, ababoni abantu ukuba bayintoni na. Bona abantu njengemali. Kwelinye ukukhupha.